FAQs - Hebei Baisite Prosthetic Orthotic Technology Co., Ltd.
Enwere m ike ibipụta akara ngosi na ngwaahịa?
Ee, a na-ebipụta akara ngosi site na laser, mana na ọnọdụ na ọnụọgụ ahụ karịrị 50pcs.
Kedu ka m ga-esi nweta katalọgụ?
Biko nweere onwe gị izitere m email ma ọ bụ whatsapp ka m nweta katalọgụ ma ọ bụ ị nwere ike budata katalọgụ site na wensite menu mmanya.
Kedu oge nnyefe gị?
Ọtụtụ mgbe, anyị ga-ahazi mbupu na 2 -5 ụbọchị.
Kedu usoro nnyefe gị?
Anyị na-anabata EXW, FOB, CIF etc.Ị nwere ike họrọ onye nke iis kasị convient na irè maka gị.
Kedu ihe anyị nwere ike ime ma ọ bụrụ na anyị ahụta nsogbu ịdịmma ma ọ bụ ọnụọgụ ya mgbe anyị natara ngwaahịa?
Biko zitere anyị foto na ihe akaebe vidiyo, anyị ga-eme ngwọta na-eju afọ n'ime awa 24 na nkwenye nke nsogbu ahụ.